Sonke dream inezinwele ethu ephilile, enhle, livundile futhi shiny. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi ukuze bawunakekele kahle sivala ukuba ezahlukene zonke lezi zici. Namuhla, abesifazane abaningi baba iso maqondana nicotinic acid, wathi ukukusiza ukugwema izinkinga nge Amalokhi. Naphezu kweqiniso lokuthi eminyakeni yamuva nje kuye kwaba inkulumo ukuthi nicotinic acid izinwele kuletha umonakalo, ngenxa yokuthandwa kwayo, ungacimi. Ingabe ngempela umphumela onjalo ongemuhle izinwele?
Izinzuzo ukusetshenziswa nicotinic acid
Nicotinic acid - liyindlela yokuqinisa izinwele, olubizwa nangokuthi "Vitamin PP". Le nto negalelo elinamandla kakhulu kuyo yonke emzimbeni womuntu. Okokuqala, isetshenziswa njengenhlangano okufakiwe kubalulekile yokudla nsuku zonke ukuze ukuqinisa amasosha omzimba. Okwesibili, le acid isibe umkhiqizo yezimonyo ethandwa, nakuba wanwetshelwa ndawo kungekudala. Singabonisa kanjani ukuchaza ithandwa kangaka? Nicotinic acid is akhuhlwe singene sezinwele, okwandisa kwegazi follicle izinwele, kuthuthukisa umzimba, futhi lokhu kugcina sekwenze isimo jikelele we izinwele ezikhathini kangcono. Lezi zinqubo efanayo "sivuke" okubizwa ngokuthi ama ithule, ngakho izinwele zethu isiqala ukhule izinwele baqine, futhi umthamo wabo uyanda. Yingakho niacin livame ukusetshenziswa lapho nezinwele eqinile. Ngaphezu kwalokho, nicotinic acid (izinwele isicelo kanye nezimpendulo ingafundwa esihlokweni ngezansi) moisturizes curls kakhulu ukwedlula kubangela ukukhiqizwa sombala yemvelo - melanin. Okungukuthi, kuyasiza ulwe kwempunga.
Umonakalo kusuka ukusetshenziswa nicotinic acid
Naphezu kwazo zonke lezo izinto ezinhle, singasho ukuthi nicotinic acid izinwele, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ukuthi okwakuthandelene, futhi ungaba nomthelela ongemuhle. Njengomthetho, umonakalo kusuka ukusetshenziswa kwalo etholakale lapho amantombazane esetshenziswa ngendlela engalungile noma bayakhohlwa umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ebalulekile. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi Vitamin PP, njenganoma iyiphi enye izidakamizwa has Izimo yayo. Kufanele uhlole uma uya ukusebenzisa leli thuluzi, ngoba uma kungenjalo nicotinic acid ukulimala izinwele kungaletha kunokuhle. Ngakho khumbula:
Nicotinic acid noma kunjalo ayikwazi isetshenziswe ezigulini abanomfutho wegazi ophakeme. Kungaholela ikhanda njalo.
Uma une ukuzwela okwandisiwe isikhumba, futhi ugweme ukusetshenziswa Vitamin PP. Iqiniso ukuthi kungabangela ububomvu okunzima isikhumba ebusweni nasentanyeni.
Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile kakhulu kunjalo ukuthi abantu abanaso nje ufunde ukusebenzisa ithuluzi okungukuthi nicotinic acid. izinzuzo zayo, efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kanye nokusetshenziswa akuyona ikakhulukazi nesithakazelo. Bamane nje bafuna ukubona imiphumela bese bayakhohlwa siphephe. Yingaleso sikhathi-ke ukuthi imizamo kungenzeka ngeze, ngoba ngeke ulethe elamukelekile.
Indlela yokusebenzisa niacin?
Thenga umlingo namuhla ngasiphi ekhemisi. Kulokhu, it is hhayi libhekene obuhlungu futhi okuthengiswa izitsha eziyisikhombisa zokwelapha ezivamile. It has nicotinic acid ngalapho izinwele zikhula zibheke isicelo ulula. Susa isixazululo kusukela isitsha nge isipetu, asuse inaliti ngawakhamela ketshezi ekhanda, uzama hit kuwo wonke amasayithi yayo. Khona-ke ngobumnene ukukuthinta izingalo ithuluzi. Khumbula ukuthi zonke lezi manipulations kumele kwenziwe ahlanzekile, wageza futhi izinwele omisiwe. Yikuphi ihlala ngenyanga (kubalulekile ukuba afeze inqubo ngalezo zinsuku, lapho ugeza izinwele zakho) ukuze sithole imiphumela emihle, kudingeka sithathe inkambo. Khona-ke thatha ikhefu izinyanga ezintathu futhi kungaba futhi kudingeke uphindaphindwe. Break kwenziwe ekhanda is hhayi ejwayele le ndlela.
Kunanzuzoni nicotinic acid?
Yiqiniso, into ebaluleke kakhulu wukuthi niacin izinwele (inzuzo noma ilimaze kuyoba - ke kuncike ulwazi yonke imithetho) iyithuluzi elihle ukusiza ubuhle uthole izinwele aluhlaza kanye obukhulu ekhaya. Vitamin PP ngeke ome izinwele zakho futhi ungasingenisi nemiphumela engemihle (ngaphandle kwalabo okuye ezichazwe ngenhla), kodwa ukusebenzisa acid ifomu evamile - akuyona indlela kuphela ukuze ngithuthukise isimo sakhe izinwele. Kungaba ukungezwa ezihlukahlukene amafutha, buso, zezinkambi amakhambi, imithi yokugeza izinwele noma isimo. Ngakho, umphumela walo kuyoba ethambile. ngeke uhlanganise ngempumelelo nicotinic acid nezixazululo oily nezinye amavithamini (A, E). Ukuze kwandiswe amandla kwezimali, sebenzisa cindezela efudumele.
Izilwane ezifuywayo imaski nge nicotinic acid
Amantombazane amaningi othanda ukukwenza ekhaya buso ahlukahlukene, ezisiza ukufeza ubuhle izinwele ekhethekile. Nicotinic acid izinwele (izinwele ukukhula imaski therefrom etholwe nje ezahlukene) lungasetshenziswa njengoba omunye izithako. Ethandwa kakhulu namuhla ekhaya zokupheka elandelayo imaski nge PP amavithamini.
Thatha ishubhu elilodwa ka nicotinic acid, engeza 2 wezipuni amafutha Jojoba, amaqanda isikhuphasha, spoon nengxenye yesixazululo vitamin E, uju yemvelo. Hlanganisa konke ubebushelezi. Sebenzisa ingxube ukuhlanza futhi izinwele omisiwe, wanikina ikhanda ngoplastiki enamanzi nethawula. Gcina imaskhi ekhanda cishe ihora ke hashaza ngamanzi afudumele.
Thatha zehena noma basma, imvubelo encane, umfuma nicotinic acid, 5 amathonsi iyiphi amafutha abalulekile (uwoyela ofanelekile amaqabunga bay noma ylang-ylang). Henna noma basmu phisa amanzi epholile abilayo ukuze degree angaba ngu-40. Chaza imvubelo emanzini, engeza zehena, shiya imizuzu emihlanu. Khona-ke ungakwazi ukwengeza zonke nezinye izithako. Sebenzisa ingxube kuze manzi izinwele, wagqoka iphasela, bopha ikhanda ithawula bese ushiye imaskhi ku ngehora. hashaza ngamanzi afudumele emva kwesikhathi.
Ngemva ukwelashwa ambalwa uzophawula ukuthi izinwele yaqala ukubonakala izikhathi eziningana siba nempilo engcono, ukuminyana babo yanda, ngobuhle. Ngakho labo abathi ukuthi izinwele niacin kuletha umonakalo, okungalungile noma into embi.
Le nqubo kokusebenzisa nicotinic acid
Uma une izinwele oily, ke phambi nicotinic acid usebenzisa inqubo kuhle hashaza engcono. Iqiniso lokuthi ungqimba amafutha ohlanganisa nezinwele zakho kukhinyabeza kwema- vitamin E e isakhiwo sabo. Kodwa ngesikhathi esifanayo, khumbula ukuthi ngeke ukwazi kufanele usebenzise amashampu, okuyinto yakhiwa abicah. Yena izovala izinwele ifilimu kungekho nto enemibala emihle, neliyoba ukuvimbela Ukungena nicotinic acid. Ukuze uthuthukise umphumela izindlela, ungasebenzisa ke ukususa ikhanda decoction herbal (burdock efanelekayo, sage noma chamomile). Qala deda nicotinic acid kusukela phezulu yasebunzini, kancane kancane ezihambayo emathempelini futhi occiput. Ngemuva kokufaka isicelo ezivamile nicotinic acid (ngaphandle kwalokho kwanoma iyiphi nezinye izithako) ukususa noma ukugeza izinwele zakhe akudingekile.
Ubani okufanele zisebenzisa niacin?
Uma ungenalo bayagula iyiphi izifo ezingathi sína, kodwa izinwele zakho ngesikhathi esifanayo sibe nombono zibuthuntu kakhulu futhi ezingaphili, khona-ke nakanjani kudingeka uzame niacin, okuyinto esikhaleni esiwunyaka owodwa nje kuzoholela izinwele zakho ukuze. Abantu abaningi abaye ukuqalisa usebenzisa nicotinic acid noma ungeze ku-buso futhi balms, waphawula ukuthi izinwele is hhayi kuphela wayeka falling, kodwa baqala ukukhula kangcono futhi ngokushesha.
Uphenyo nicotinic acid
Uma sikhuluma niacin kanjani wusizo izinwele zethu kufanele sinake kobufakazi zabantu asebethole wasebenzisa ngezinhloso yezimonyo. Ukuze afakazele ukuthi Vitamin PP namanje bakwazi ukuxazulula izinkinga eziningi izinwele, zingxoxo zabanjwa. Babonisa ukuthi 35% wabantu bakwazi ukuthuthukisa isimo curls. Ngakho musa 100% ukholwa egomela ukuthi nicotinic acid ukulimala izinwele kuletha kuphela. Kuyinto, njengoba uke waphawula kakade, ukuqinisekisile kuphela indlela engalungile ngokusetshenziswa kwayo.